PyCharm, ine simba IDE yekugadzira zvirongwa nePython | Linux Vakapindwa muropa
Python ndiyo inonyanya kufarirwa mutauro wehurongwa mumakore achangopfuura, kwakadaro ndiko kubudirira kuti mumwedzi ichangopfuura zvishandiso zvekugadzira zvirongwa nemutauro wekuronga uyu zvakasimbiswa. Nekudaro, mazhinji edhita edhisheni akawedzera kuenderana kwavo nePython, asi isu tinofanirwa kutaura kuti mureza Python IDE haichisiri kushandisa aya makodhi edhita.
PyCharm iyi inozivikanwa IDE iyo zvakare ine vhezheni yekuparadzirwa kweGnu / Linux, izvo zvinoita kuti zvive nyore kushandisa nekugadzira zvirongwa neiyi programming mutauro.PyCharm ndeye IDE, ndiko kuti, haisi chete kodhi yekodhi asiwo ine debugger, muturikiri uye zvimwe zvishandiso zvinozotibatsira kugadzira uye kutumira kunze zvirongwa zvatagadzira. PyCharm ine muturikiri mukodhi kodhi inozotibatsira kuziva kana kuziva zvikanganiso zvinogona kuitika mukodhi munguva chaiyo, chimwe chinhu chakagadzira Python nePyCharm yakasarudzwa nevazhinji vashandisi vari kutanga kuronga.
PyCharm haisi kungowanikwa pane yepamutemo IDE webhusaiti asi yatove nayo imwe package mune snap fomati uye imwe iri flatpak fomati yekuisa pane chero kupi kweGnu / Linux kugovera.
PyCharm ndeye IDE ndeyekambani yeJetBrains, muridzi weIntelliJ IDEA. Uye mune iyo PyCharm, kune mavhezheni maviri, iyo yekutanga vhezheni yaunofanirwa kubhadhara uye imwe freemium kana nharaunda vhezheni iyo yemahara asi isina rutsigiro rwakafanana neyekutanga vhezheni. Kana isu tichida kuisa PyCharm mukugovera kwedu tinogona kuzviita nekuvhura terminal uye typing zvinotevera:
Kana kana isu tichida kushandisa iyo Flatpak fomati, ipapo isu tinofanirwa kuitisa inotevera kodhi:
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » PyCharm, ine simba IDE yekugadzira zvirongwa nePython
Iyo itsva vhezheni yeWine 3.14 yave kuwanikwa kurodha pasi uye nekuisa